Ukuhlangana kwamabhere we-polar angama-200 kuxwayisa ngokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amabhere asePolar abe uphawu lokushintsha kwesimo sezulu. Njengoba zihlala e-Arctic, enye yezindawo ezisengozini kakhulu, ziphoqeleka ukuba zihambe amabanga amade ukuze zithole inyamazane ethile. Idamu elithola ekuqaleni lincibilika indlela yokuphunyuka ngenxa yokuthi lingahlala liphila.
Kepha futhi, ukwanda kwamazinga okushisa kushintsha indlela yokuziphatha kwalezi zilwane ezibabazekayo: uma ngaphambili kwakunzima kakhulu ukuzibona ngamaqembu amakhulu, manje ukuqoqwa kwamabhere we-polar angama-200 kuye kwaxwayisa ososayensi.
Ngokushintsha kwesimo sezulu nokuhlala ezweni eliya lifudumala Abantu bebhere elimhlophe bachitha isikhathi esiningi emhlabathini futhi basondela emadolobhaneni, okuthile okungaba yingozi kubantu kanye nokusinda kohlobo lwazo.
Ngemuva kokuncibilika, lezi zilwane ziphumula phakathi kuka-Agasti noNovemba esiqhingini saseWrangel, oLwandle iChuckchi (enyakatho-mpumalanga yeSiberia). NgoDisemba baphinde baqala ukuzingela ngophawu, kepha njengoba ukuzingela kungumsebenzi oba nzima ngokwengeziwe, noma yisiphi isilwane esitholakala sifile siyohlala singcono kunalutho.
Umkhosi wePolar Bear Wrangel Island 2017 _ uJulie Stephenson kusukela UJulie Stephenson on Vimeo.
Impela yilokho u Amabhere we-polar angama-200 aqoqana adla isidumbu somkhomo eyayikhucululwe ngasogwini lolwandle. Leli qembu lalinemindeni eminingana, kufaka phakathi omama ababili ngamunye elandelwa amawundlu amane. Lapho bebona lesi senzakalo, ososayensi abakwazi ukusibona, kuhlanganise no-Alexandre Gruzdev, umqondisi we-Wrangel Island Nature Reserve, bamangala.
Lokhu yinto uGruzdev ayichazele i-AFP, kuyaqabukela ukubona. Yize izivakashi zingakujabulela, kusengumphumela owodwa wokuguquka kwesimo sezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuhlangana kwamabhere we-polar angama-200 kuxwayisa ngokushintsha kwesimo sezulu